နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေး စရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ သင်ဟာသင့်ရဲ့လစာက ပိုနည်းလာသလို အောက်မေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာ သင့်လစာမတိုးဘဲဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေရရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြုံရတတ်ပြီး သင့်လစာမတိုးတာ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေရင် ဆက်ပြီးသည်းခံစောင့်ဆိုင်းဖို့ သင့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် လစာမတိုးဘဲ...
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေရဲ့ အရည်အချင်း ၅ မျိုး
၁။ သူတို့တွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်မြင့်မားတယ်။အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဆန္ဒတစ်ခုအရင်းပြုနေပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကူး​ကောင်းရင်ကောင်းသလို၊ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တတ်သလို ကိုယ့်လုပ်ငန်းကလည်း အောင်မြင်လာမှာပါပဲ။နောက် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်တိုင်အောင် လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲ အချိန်ကုန်ခံမယ့် လူတွ...
Visits : 3838
Visits : 3297
ကိုယ့်အထက်လူကြီးကို အလုပ်ဖြုတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ခု
လူတော်တော်များများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာငွေကြေးကိစ္စရပ်တွေက သူတို့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေ တတ်ပါတယ်။လစာနည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ များတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီငွေပမာဏအပေါ်မှာ သူတို့မှီခိုရပ်တည်ကြပါတယ်။ သူတို့အလုပ်အတွက် နေ့နေ့ညညအချိန်ပေးပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက် သူတို့ရှင်သန်နေသလို မျိုးပါ။ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခက်တဲ့အခါ အခက်ကြုံတတ်ပါတယ်။ မန...
Visits : 3054
၁။ သဘာဝတရားကို ခံစားခြင်း။ဒါက ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ လျော့တွက်ကောင်းတွက်ပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝတရားကို ခံစားနေထိုင်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့ချပေးပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမြင့်မားလာစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားကို မြင့်တက်စေသလို ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့သူ တစ်ယောက်တောင်မှ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။၂။ လေ့ကျင့်ခန်း။လေ့ကျင့်ခန်းဟ...
၁။ To do List မရေးမိခြင်း။အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ဖို့မေ့သွားတာမျိုး ကြုံဖူးလား။ မေ့ဖူးတယ်ဆိုရင် သေချာတာတော့ To do Listကို မသုံးလို့ပါပဲ။ သုံးတယ်ဆိုရင်တောင် အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ To do List ကို အကျိုးရှိရှိ သုံးနိုင်စေမယ့် လျို့ဝှက်ချက်က ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ဦးစားပေးအလုပ်တွေကို ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တော်တော်များမျာ...
Visits : 5094
31 - 36 of ( 73 ) records